समाचार - प्याकिंग बक्सहरू कसरी विकसित हुन्छ?
आधुनिक उद्योगको तीव्र विकास र जनताको जीवन स्तरको निरन्तर सुधारको साथ, प्याकिंग बक्सहरूमा जनताको माग बढ्नेछ। त्यसो भए, उपभोक्ताहरूले अब प्याकिंग बक्सहरूको गुणस्तरमा उच्च आवश्यकताहरू राख्छन्। त्यसो भए यसको लागि उत्पादन प्रक्रियामा नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, र उपकरणको स्वचालित स्तरमा निरन्तर सुधार ल्याउनेछ। केवल नयाँ परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्दा र बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दा बक्स उद्यमहरू प्याकि can गर्न सक्दछन् उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता।
यो बजारले परीक्षण गर्नु पर्छ यदि तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि कमोडिटीको राम्रो बिक्री छ वा छैन। प्याकेजि्ग सम्पूर्ण मार्केटिंग प्रक्रिया भर एक धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो उपभोक्ताहरूसँग यसको आफ्नै अनौंठो छविद्वारा सञ्चार गर्दछ, तिनीहरूलाई पहिलो दृष्टिमा सामानहरूमा चाखलाग्दो बनाउँदछ। बजारको अर्थव्यवस्था चीनमा विकास हुने क्रममा धेरैजसो उपभोक्ताहरू झन् झन् तर्कसंगत हुँदैछन्। यसले उत्पाद बिक्रीको कठिनाई मात्र बढाउँदछ, तर प्याकेजिंग बक्सहरू डिजाइनलाई अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दछ।
सामाजिक अर्थव्यवस्थाको निरन्तर विकासको साथ, आधुनिक औद्योगिक बजारको क्रमिक शक्ति पनि प्याकेजि ofको विकासको लागि अग्रणी छ। तपाईंको आफ्नै उत्पादनहरू भीडबाट बाहिर निस्कन चाहनुहुन्छ, प्याकेजिंग बक्स बिस्तारै छनौटको लागि महत्वपूर्ण भयो। व्यक्तिहरू आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न प्याकेजि she शेलहरू प्रयोग गर्दछन्, र भौतिक र आध्यात्मिक जीवन स्तरको सुधारको साथ, उत्पाद प्याकेजि toलाई बढी ध्यान दिइन्छ।
१. मुख्य प्याकेजि Display प्रदर्शन गर्नुहोस्: सामग्रीको परिप्रेक्ष्य प्याकेजिंग बाहिरी प्याकेजिंग मार्फत देख्न सकिन्छ, जुन उपभोक्ताहरूसँग बढ्दो लोकप्रिय छ। जे होस्, यो प्रभाव कार्डबोर्ड खोल्ने मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ, धेरै ब्रान्ड मार्केटरहरूले यो लक्ष्य हासिल गर्न छनौट गर्दै छन् प्याकेजिंग-एम्बेडिंग प्लास्टिक विन्डोमा कार्डबोर्ड संरचनामा संयोजनको माध्यमबाट। कार्डबोर्ड र प्लास्टिक भविष्यमा एक धेरै प्रभावी संयोजन हुनेछ।
२. बनावट सामग्री: बनावट सामग्री कस्मेटिक प्याकेजि inमा धेरै लोकप्रिय भएको छ। बनावट प्राय: कागजको सम्पूर्ण पानामा एम्बॉसिंग बान्की द्वारा उत्पादन गरिन्छ। जब व्यक्तिले यसलाई लिन्छन्, तिनीहरूले पत्ता लगाउँदछ कि यसले स्पर्श प्रदान गर्दछ जुन मानक वा चिल्लो कार्डबोर्ड भन्दा फरक छ। जे होस् सहज वा म्याटको अन्तिम प्रभाव अधिक छ, अधिक ग्राहकहरूले अझै पनि टेक्स्चर सामग्रीको साथ मैट प्रभावलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
मुद्रित कागज बक्स
Flash. फ्ल्याशिंग र चमकदार: कस्मेटिक प्याकेजि boxes बक्सहरूमा, चम्कने र चकाउने सामग्रीले बनेको प्याकेजि eye नेत्रगोललाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न देखा पर्न शुरू भयो। विशेष प्रभाव स्याही, पेंटहरू र धातु सामग्रीहरू यो प्रवृत्तिमा सामेल हुँदैछन्। निर्माताहरूले यस नवीनता मार्फत उनीहरूका उत्पादनहरू भिन्न पार्न प्रयास गर्दछन्, तर एकै समयमा लागतमा ध्यान दिनुहोस्। त्यसकारण, यो उपस्थिति प्राप्त गर्ने र लागत बचत गर्ने तरिका भनेको धातुको मसी वा प्रिन्टिंगमा चमक प्रयोग गर्नु हो। मोती तेल को भूमिका। भविष्यमा, हामी बजारमा अधिक चकाउने सजावटी बक्सहरू देख्नेछौं।
D. अनौंठो आकारको बक्स आकार: अधिक र अधिक कम्पनीहरूलाई बिभिन्न प्याकेजिंग बक्स आकारहरू आवश्यक पर्दछ, केहि परिवर्तनहरू आवश्यक पर्दछ जुन परम्परागत आकारको सट्टा परम्परालाई तोड्दछन्। यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नयाँ परिवर्तन भनेको इन्जेक्शन मोल्डेड प्लास्टिकको अन्त क्याप्सको प्रयोग हो।
आधुनिक उद्योगको तीव्र विकास र व्यक्तिको जीवन स्तरको निरन्तर सुधारको साथ, प्याकेजि boxes बक्सहरूको लागि जनताको माग बढ्नेछ।